Ahoana no nahatonga anao ho Atheista? - Dinika forum.serasera.org
Ahoana no nahatonga anao ho Atheista?
Fitohizan'ny hafatra : Ahoana no nahatonga anao ho Atheista?
rhaj0 - 14/05/2018 19:02
REsaka teny @ FB ny ahy ity (fa nahitsiko kely), fa tiako tsapaina koa ny eritreritry ny Atheista (sy Kristiana) namana eto @ serasera eto.
Ny an'eritrereto tsotra fotsiny, dia ny t@ fotoan'andro taloha elabe, dia lojika tsotra tsapako dia:
1- TSY hay na dia ny any ambadiky ny bonga atsy @ 100km à la ronde. T@ taona 0 izao ohatra, dia zareo tao moyen-orient tao, ireo Romana sy Jiosy ary Jentilisa, dia TSY nahalala akoriny fa Kilimanjaro anie ao atsimotsimo ao. Izany Australie na Amazonie na koa azany i Gasikara izany aloha t@ izany dia tena TSY hainy akoriny ny fisiany.
2- Dia TSY hay koa ny "ao ambony ao", na rahona na orana na varatra, na masoandro na volana na kintana.
3- Dia TSY hay koa ny "ao ambany ao"; inona io volkano io.
Ka rehefa TSISY hay izany rehetra izany, dia ... samy namoromporona teny daholo. Izay mahay mamorona, sy mahay manindry aloka ny namany no mampanjaka ny hevitra noforomporoniny tao.
Ary ny valin-teny tsotra @ ireo zava-tsy hay be dia be ireo, dia :
A- God, na Dieu, na Andrmntra, na Andriananahary izany HONO no namorona na namboatra na nahatonga an'izao sy izao, ary mibalady eny @ rahon'ny lanitra eny Izy io@ io.
B- Pensée magique. Toa ny hoe, mikimpy mafy fotsiny dia tanteraka ny ao an'eritreritra, na miracle io, na telepathie, na faminaniana.
Ka ny isan'ny nampihiratra ny saiko, satria mba "nino na nampinoana" ary vita batisa ihany koa kay aho ity t@ mbola kely, dia anirahiko anao mba azahoanao ny fieritreritro:
Ndana ange ianaro ny Tantaran'ny ReligionS ee... Religion ho'a fa tsy Christianisme. Dia ho hitanao fa misy ReligionS (marobe), araka ny fotoan'androny sy jeogirafiany, ary samy nanana ny Dieu-ny sy ny pensées magiques-ny. Samy nilaza ho "tena izy".
Ary ho hitanao koa, indrindra raha borné @ Christianisme ianao, fa kay ny Christianisme anie ka naka tahaka ny REligions samy hafa nisy talohany. Izany "teraka tamina Virijiny" izany izao ohatra, dia efa fantasme-n'ny olona taloha tsy nipataloha hatry ny elabe.
Fa ny fehin-kevitra dia ity: rehfa tsapako fa samy namoromporona (god sy penses magiques) teny daholo raolona, ohatra voalohany ny ao @ Babioly, dia lasa Athesita izao io aho.
Ka ho an'ny namana atheista eto ho'a, dia mba tiako ho fantatra:
rhaj0 - 15/05/2018 15:19
Io "lojika tsotra tsapako" io, dia t@ izaho 9 na 10 taona no ni-click t@ izay, rehefa namaky ireo contes et légendes h@ ny an'ny indiana (peaux-rouges) ka h@ indiana (karana).
rhaj0 - 19/03/2015 16:42
wow.. tena hitako ireo series-na Contes et Legendes-n'ny fahazazako. Ohatra ity
heeee... fahiny hany izany
endriny - 16/05/2018 16:15
Ny nahatonga ahy ho tsy mino ny Atry ny Kristianina, dia noho ny fahatsapako fa ireo mpitondra fivavahana rehetra dia mampiasa ny baiboly hangoronan-karena sy anampiana fotsiny ireo vazaha fotsy hoditra mba hanjanaka ara-tsaina sy ara-toekarena ny tany tsy mitovy aminy.
rhaj0 - 16/05/2018 17:52
ny "fampiasana ny BAiboly" nataon'ny vazaha izany no nahasirihanao ny absurdité-n'ity resak'ity.
Ary ny "fampiasana ny Baiboly" ataon-dry RBNIR eto koa angaha ohatra tsy mbo loza koa?
Dreamlover14 - 16/05/2018 20:58
Diso ilay hoe t@ taona 0 satria arivo taona maro talohan'io dia efa nisy sivilizasiona maro teto ambonin'ny tany (Egyptienne, Grika, Azteques, sinoa, sns...) saingy nisy fahapotehana dia nanjavona ny teknolojia nampiasainy.
Nisy ny hery miafina nahafahana nanangana ny pyramides ao Egypte satria eritrereto hoe fomba ahoana no nampiakarana bolongam-bato avo noho ny olona iray kanefa tsy nisy grue akory t@ izany. Nisy ny calcul efa nampiasain'ny architecte t@ izany @ rafi-trano, orientation, sns...
Io hery miafina io amiko no avy @ Andriamanitra izay niaro sy nitantana ny vahoaka Jiosy hahavita ny fananganana ny Pyramide sy nanampy t@ fivoahana avy tao Egypte.
Aoka handalina lalina kokoa isika fa manjary mandiso zavatra be
RBNIR - 17/05/2018 12:47
Antony maro no mety havalin'ny olona, fa teny 1 ihany no hamitinana azy dia hoe TSY MINO NY FISIAN'ILAY NAHARY izy ireo......
Ampahafantarina ihany anefa fa ny tsy mino dia hanana ny anjarany...
« Fa ny osa sy ny tsy mino sy ny vetaveta sy ny mpamono olona sy ny mpijangajanga sy ny mpanao ody ratsy sy ny mpanompo sampy ary ny mpandainga rehetra dia hanana ny anjarany ao anatin'ny farihy mirehitra afo sy solifara; izany no fahafatesana faharoa. » (Apokalypsy 21:8)
endriny - 17/05/2018 14:39
1) ianao ihany no miteny fa " Nisy ny calcul efa nampiasain'ny architecte t@ izany @ rafi-trano, orientation, sns...". kanefa dia lazainao fa nisy hery miafina indray nampiakarana an'ilay vato be teny ambony teny. Na ny baiboly aza dia mitantara ny fomba nanamboarana ny pyramide tamin'ny herin'ireo andevo marobe, ka an'isan'izany ny israelianina.
2) Raha herin'Atra no nanaovana ny pyramida, dia nahoana no novonoin'Atra ny zanaka lahimatoan'i Ejypsianina?
endriny - 17/05/2018 15:01
Ny zavatra iray nahatonga ahy hiala tsy ho kristianina ihany koa dia ny fahitako ny zavatra nitranga tany amin'ny tanana nisy anay tany ambanivohitra be tany.
Nisy Ramatoa be iray izay, mpimasy, ary izy no natao mihintsy hoe mpitsabo nentim-paharazana teo amin'ny tananay sy ny tanana manodidina. Ora 4, dia an-tongotra avy eo mantsy ny tobim-pahasalamana akaiky indrindra. Ary dia nanampy tokoa izy, ary izay foy no nomena azy. Nampiteraka, nanotra ankizy tapaka, be dia be e.
Fa nisy fotoana, nanomboka tonga teny aminay ireo katekista sy ry masera tamin'ny taona 1990 tany ho any. Dia nizara akanjo, ary tonga isan-kerin'andro nitondra fanafody maimaim-poana. (Tsy haiko kosa anefa aloha na mpitsabo ry Katekista sy ry Masera). Tonga niresaka tamin'ilay mpimasy matetika ry zareo, ary ny nahagaga dia tao mihintsy ry zareo no nitoby. Ilay Ramatoa koa moa tsotra be dia napetrany tany ambony rihana ireto vahiny.
Volana vitsy taty aoriana dia voatarika ho mpivavaka Katolika ilay mpimasy, ary dia nodorana teo amin'ny tokotanibe, fivoriana ireo ody sy tapa-kazo tao aminy. Nomeny tany ananganana fiangonana ry Masera sy Katekista. Ngeza izany tany izany a, angamba 10 sa 15ha eo ho eo.
Nisy ireo olona faly tamin'ny nataon'ity Ramatoa Mpimasy ity.
Saingy indrisy, taty aoriana dia samy nanenina daholo ny fokonolona. Tsy maintsy nandeha tongotra 4 na 5 ora vao tonga any amin'ny toeram-pitsaboana rehefa marary. Ary mety tsy vita eo aza ny fitsaboana fa tsy maintsy miakatra any Arivonimamo, lalana 12-14 ora miala avy eo aminay, raha dian-dehilahy.
Ry Masera sy ry Katekista tsy tonga isan-kerin'andro intsony nizara fanafody sy akanjo.
Ny tena nahonena dia rehefa azon-dry masera ny tany, dia nofefeny tamin'ny tarobia, nasiany mpiambina. Ka na ny firaofan'ny omby ahitra rehefa ririna aza lasa tsy ampy intsony satria 15ha be izao no tsy azo kitihina intsony.
Nanao trano, sy fiangonana ry Masera, ary manana Toyota misy labasy izay. Indray andro nisy olona niharam-boina nototoin'ny omby, ka tsy maintsy nentina niakatra tany Arivonimamo haingana. Tonga nandondona teo amin-dry Masera, niangavy, saingy indrisy fa an'ny Fikambanana hono ny Fiara, ka tsy maintsy mila miera amin'ny fikambanana amin'ny fampiasana azy, fa tsy tapaky ry zareo.
Dia natao an-kilanja, nentina nihazakazaka nankany Arivonimamo ilay Rangahy.
Elino - 17/05/2018 15:27
Salama ianao =rhaj0
Diso io Voalazanao io
600 Taona tany ho any talohan'i Jesosy Kristy
Mba vakio ny Boky Isaia 40: 21-22
21 Tsy fantatrareo va? Tsy efa renareo va? Tsy efa nambara taminareo fony taloha va? Tsy efa azonareo an-tsaina va ny amin'ny fanorenan'ny tany?
22 Izy no mipetraka amin'ny habakabaka ambonin'ny tany, ary ny mponina et? dia tahaka ny valala; Izy no mamelatra ny lanitra tahaka ny lamba manify kararavina ary manenjana azy tahaka ny lay hitoerana;
Elino - 17/05/2018 15:28
rhaj0 - 17/05/2018 15:47
Tsy azoko tsara k'lou ny resak'i Dreamlover14 sy Elino ny @ hoe, "diso" ity nosoratako ity:
T@ taona 0 izao ohatra, dia zareo tao moyen-orient tao, ireo Romana sy Jiosy ary Jentilisa, dia TSY nahalala akoriny fa Kilimanjaro anie ao atsimotsimo ao. Izany Australie na Amazonie na koa azany i Gasikara izany aloha t@ izany dia tena TSY hainy akoriny ny fisiany.
Avadibadiho ny BAiboly, fa ny Etiopiana no HANY fantatra. Ny Amerika hainareo ihany fa 1470 vao fantatry ny .. Kristiana ny fisiany. Inty ny sketch ny @ fahatakaran'ny Baiboly ny Latera. Ka i Kilimanjaro ao atsimo io izany, na koa Himalaya no frontière-n'ny Tany izay fisaka (plate) raha ny fahalalam-BAiboly.
rhaj0 - 17/05/2018 16:02
endriny Ny zavatra iray nahatonga ahy hiala tsy ho kristianina ihany koa dia ny fahitako ny zavatra nitranga tany amin'ny tanana nisy anay tany ambanivohitra be tany.
Nisy Ramatoa be iray izay, mpimasy, ary izy no natao mihintsy hoe mpitsabo nentim-paharazana teo amin'ny tananay sy ny tanana manodidina. (..) nanomboka tonga teny aminay ireo katekista sy ry masera (..) ary dia nodorana teo amin'ny tokotanibe, fivoriana ireo ody sy tapa-kazo tao aminy.
Saingy indrisy, taty aoriana dia samy nanenina daholo ny fokonolona. (..) Ry Masera sy ry Katekista tsy tonga isan-kerin'andro intsony nizara fanafody sy akanjo... dia nofefeny tamin'ny tarobia, nasiany mpiambina. Ka na ny firaofan'ny omby ahitra rehefa ririna aza lasa tsy ampy intsony satria 15ha be izao no tsy azo kitihina intsony...
Raha ny fahazoako an'i Endriny izany dia:
1- Ny fampiasana ny Baiboly nataon'ny Mpanjana-tany sy Mpanjana-tsaina dia nampi-click an'i Endriny fa tena absurde ary tena manimba akoriny azany ity finoana (kristiana) sy ny Andriamanitra sy ny cortezy miaraka aminy, pensées magiques, mirakla sy faminaniana, sy paradisa/helo sy ny masina-masina sns...
2- Ny nataon'ny Olomben'ny Kristianisma, izay nanimba na nanakorontana ny fiaraha-monina sy ny fisainana, dia nampi-click an'i Endriny, fa tena absurde ary tena manimba akoriny azany ity finoana (kristiana) sy ny Andriamanitra sy ny cortezy miaraka aminy, pensées magiques, mirakla sy faminaniana, sy paradisa/helo sy ny masina-masina sns...
Ary dia izay no nahatonga an'i Endriny ho "tsy nino" (ny Atry ny Kristiana) intsony..
Ny ahy indray ho'a, ho fampatsiahivana, dia
0- vao ilay "tantaram-baiboly" tantaraina amiko fotsiny dia efa tsy neken'ny saiko intsony, 9 na 10 taona aho io, fa dia hitako tena absurde ity finoana (kristiana) sy ny Andriamanitra sy ny cortezy miaraka aminy, pensées magiques, mirakla sy faminaniana, sy paradisa/helo sy ny masina-masina sns...
Izaho indray dia zao lasa
- tena "atheista"
- TSY mino izany Andrmntra Andrmntra izany, na Zanahary io, na Vishnu, na i Zeus io na i Jupiter...
- satria dia Imagination-n'olona daholo izany.
Io ho'a ilay hoe "samy namoromporona" tao daholo ireo olona tao anatin'ny tsy-fahalalany, t@ fotoan'androny sy tao @ jeorgirafiany aby tao
rhaj0 - 22/05/2018 20:51
Ato izany misy listr'ireo olona, izay notaizana "hino" fony kely, fa nony lasa lehibe, dia lasa atheist na agnostic..
Ohatra hoe, ry Castro sy The Dong, na koa Hitler sy Mussolini, na i Francois Hollande, dia ry Darwin sy ry Nietzsche...
Fa ireto koa no atheist malaza
ry Democritus sy Epicurus, Freud sy ry Nehru, Warren Buffet sy Mark Zuckerberg ary Steve Wozniak, na Bruce Lee sy Mike Jagger...
endriny - 23/05/2018 14:37
Taty aoriana dia vao maika nisokatra ny masoko, satria ny zavatra lazaina ao am-piangonana dia hoe: Sambatra ny mahantra
Kanefa ry Masera sy ry Mopera tsy mandeha raha tsy 4 x 4, ary tezitra be I Mopera raha ron'anana sy ovy no omena azy rehefa mitsidika fiangonana izy.
rhaj0 - 23/05/2018 15:03
endriny Taty aoriana dia vao maika nisokatra ny masoko, satria ny zavatra lazaina ao am-piangonana dia hoe: Sambatra ny mahantra
io tokoany anie no mahaloza ny Kristianisma ee... (TSY) i Masera sy Mopera no "olon-doza", fa ilay "fampianarana/soatoavina" mihintsy no mivaralila.
Mba halalino anie ny Fivavahana hafa. Ohatra ny Hindu na koa ny Amerindiana.
Ny "fampianarana" sy "soatoavina" dia ny hanampiana ny mahantra hivoaka ny fahantrana.
Fa ny an'ny Kristianisma izany, dia avelao ny mahantra ho mahantra ao, fa "sambatra" HONO izy ao.
gasy1zay - 13/06/2018 17:10
Mba niandry aho sao mba misy mpisera ankoatra an'i rhaj0 atheiste eto , fa ohatrany tsy misy an! i endriny tsy atheista raha ny fahitako azy fa ny kristianisma no ohatrany tsy azoazony fa toa mino Andriamanitra mpahary ihany izy ( à confirmer ) sa tsy zay ry endriny?
rhaj0 - 13/06/2018 18:46
Izaho koa mba niandry raha misy mpisera atheist eto
Fa tsy maninona izany eee... Atsy @ FB misy vondrona "gasy sahy misedra" tena @ ilay izy
Dia nigogola koa aho hoe, gasy atheist/athée, fa tena tsy hitan'Ineny gogola afa-tsy ity (sy izaho) ee
Celestine Emberton, Malagasy American
I’ve been an atheist for as long as I can remember and I also identify as black.
Dia ato koa
Madagascar: 7% considère que la religion N'est PAS importante dans votre vie
Strong3 - 30/11/2018 09:41
athéiste hatrany akibon-dreniny i rhaj0
ary ny fahaizana ampahalalana no lalovany no tsy nahitany izany fiangonana sy ny hery tsy hita maso izany
ny mahatsikaiky dia ireo fombafomba tsy mahomby eny tontolo eny no angalany référence fa absurde ny finoana hery tsy hita maso
ny faniliana ny fisian'Andriamanitra anefa dia manaraka azy eny ihany ka tsy mampatory azy amanalina ka toa ireo religion izay mamafy hevitra koa izy HINOAN'nY OLONA REHETRA